FITAKIAN’NY SMM SY SGM : Tsy misy ny « service minimum » amin’ireo fitsarana any amin’ny Faritra
Mikatso tanteraka ny raharaham-pitsarana. Mbola ao anatin’ny fitokonana sy fitakiana avokoa ireo mpitsara manerana ny Nosy izay mivondrona ao anatin’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM) sy ny sendikan’ny mpirakidraharaha (SGM) hatreto. 10 octobre 2017
Nanamafy omaly ny delegen’ny sendikan’ny mpitsara avy ao Fianarantsoa, Andriatsivaliana Oelinjaka fa mbola hanohy ny fitokonana izy ireo amin’ity herinandro ity. « Ho an’ny sendikan’ny mpitsara sy ny sendikan’ny mpirakidraharaha miasa ao Fianarantsoa dia mbola manohy ny fitokonana izahay ary mitaky ny fifampiresahana amin’ny minisitera.
Raha ho anay ao Fianarantsoa manokana dia mbola mitohy ny tolona amin’ity herinandro ity mandra-pisian’izay fifampiresahana izay », hoy ny fanazavany. Ankoatr’izay dia nambarany ihany koa fa miato avokoa ny raharaham-pitsarana rehetra amin’ireo tribonaly any amin’ny faritra ary tsy misy mihitsy na dia ny « service minimun » aza ka isan’izany ny fitsarana ao Fianarantsoa, Mahajanga sy ireo Faritany hafa.
« Mandra-pisian’ny fifampiresahana dia nanapa-kevitra ihany koa izahay fa tsy hisy mihitsy aloha ny service minimun hatramin’izao », hoy hatrany ny fanambarana nomen’ny delegen’ny sendika avy ao Fianarantsoa. Raha ny eo anivon’ny tribonaly Anosy manokana kosa indray dia misy ihany ny fandraisana asa vonjimaika na « service minimum » ataon’ireo mpitsara. Araka ny loharanom-baovao voaray anefa dia na misy aza izay fandraisana asa vonjy maika izay dia azo lazaina ho mikatso ihany ny raharaha rehetra mandeha eny anivon’ny fitsarana amin’izao fitokonana ataon’ny mpitsara sy ny mpiraki- draharaha izao.
Nisy tamin’ireo olona manan-draharaha ao amin’ny tribonaly Anosy izay tokony ho vita ny herinandro lasa teo no tsy maintsy naverina ho amin’ny fotoana manaraka indray. Manaporofo izany fa na misokatra aza ny lapan’ny fitsarana ary na dia mifanaretsaka aza ireo olona mifamezivezy eny an-toerana dia mbola mihitsoka ny asa rehetra eny anivon’ny fitsarana. Miandry ny valin’ny fitakiana avy any amin’ny fanjakana amin’ny alalan’ny minisiteran’ny fitsarana ireo mpitokona.
Tsy fifampiresahana sy fifampidinihana am-bava intsony anefa no ilain’izy ireo fa ny hivoahan’ny didim-panjakana avy amin’ny filan-kevitry ny governemanta izay mamaly ny fangatahan’ny Smm sy ny Sgm. Nohamafisin’ny delegen’ny sendika avy ao Fianarantsoa hatrany fa raha mivoaka avy hatrany dia mandray ny asany ireo mpitsara sy mpiraki-draharaha.